आषिश जो कहिलै सकेन्ड भएनन् …जो बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै भगवानको प्यारो भए – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आषिश जो कहिलै सकेन्ड भएनन् …जो बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै भगवानको प्यारो भए
तुलसीपुर। सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडा नं. १ का १७ बर्षीय आषिश बस्नेतको आइतबार बिहान दाङको तुलसीपुर तर्फ आउँदै गर्दा सवारी दू’र्घटनामा परि मृ’त्यु भयो ।
राप्ती राजमार्ग अन्तरगत सल्यानको थारमारे बाट दाङको तुलसीपुर तर्फ आउँदे गरेको भे १ च १८९० नम्बरको डबल क्याप जीप कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ३ मुलपानी नजिक बिहान पौने ८ बजेतिर दु’र्घटनामा पर्दा बस्नेतका सहोदर भाइ १४ बर्षीय आयुशसहित ६ जना घा’इते भए ।
आयुशको अवस्था सामन्ने रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर, ग’म्भीर घा’इते आषिशको भने उपचारका क्रममा तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृ’त्यु भयो ।बस्नेतका दाजु भाइ दाङको तुलसीपुरमा कोठा भाडामा बसेर पढ्ने गर्दथे । आषिशले तुलसीपुरस्थित गोरखा माविमा कक्षा १० (ए) सेक्शनमा पढ्थे ।
उनका भाइ आयूश सोही बिद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्यनरत छन् ।बिद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल बिजय जिएमका अनुसार विद्यालय स्थापना कालदेखि २०६८ सालदेखि नै आषिशले उक्त बिद्यालयमा पढ्दै आएका थिए । उनकी दिदी अम्बिकाले पनि सोही बिद्यालयबाट आइएसी गरेर हाल काठमाडौं पढ्न गएको हुँदा दाजु भाइ मात्रै तुलसीपुरमा बसेर पढ्दै आएका थिए ।
पढाईमा दाजु भाइ नै अब्बल थिए । उनीहरुका बुवा हिरालाल बस्नेत थारमारेमा पढाउँछन् ।प्रिन्सिपल जिएमका अनुसार आषिश कहिलै सेकन्ड भएनन् । ‘आषिश हाम्रो बिद्यालयमा भर्ना भएदेखि कहिलै सेकन्ड भएको रेकर्ड थिएन,’ उनले भने ‘ यसपाली एसइईमा पनि आषिशको ठूलो भरोसा थियो ।
बिद्यालयको फष्ट ब्याए गुमाउँदा हामी निकै मर्माहत भएका छौं।’ आषिश जत्तिकै तिक्ष्ण बुद्धिको बिद्यार्थी जन्माउन र फेरि बिद्यालयले पाउन तत्काल संभव नरहेको उनले बताए । प्रिन्सिपल जिएमले आषिशलाई जीव बिज्ञान पढाउने गर्थे ।‘मैले माया गरेर उस्लाई बस्नेतजी भन्ने गर्दथे,’ जिएमले भने ‘ त्यति प्यारो, बर्षौंदेखि आँफूले पढाएको, खेलाएको र त्यति ट्यालेन्ट बिद्यार्थी गु’माउनुको पी’डा शब्दमा ब्यक्त गर्न संभव छैन।’
प्रिन्सिपल जिएमका अनुसार आषिश आफ्नो कक्षाको सबै भन्दा उत्कृष्ट बिद्यार्थी रहेको हुँदा कक्षामा मोनिटरको जिम्मेवारी पनि उनैलाई प्रदान गरिएको थियो ।‘त्यसैले कक्षा कोठा अनुशासित र मर्यादित राख्न मात्रै हनै कहिले काँही शिक्षक नभएको समयमा अरु बिद्यार्थीलाई पढाउने समेत आषिशको क्षमता थियो,’ जिएमले भने ।
सोमबार बेलुकी मात्रै तुलसीपुरको सितलपुर घा’टमा आषिशको अन्तिम सं’स्कार गरिएको छ ।उनका बुवा हिरालाल घटना सुनेदेखि नै बे’होस छन् । त्यसैले उनी छोराको अ’न्तेष्टिमा जान नसकेको प्रिन्सिपल जिएमले बताए । गोरखा माविले सोमबार आषिशको मृ’त्युको शो’कमा बिद्यालय बन्द गरेको प्रिन्सिपल जिएमले बताए ।
प्रिन्सिपल जिएमका अनुसार यो बीचमा आषिशका बाजेको मृ’त्यु भएको थियो । बिद्यालय कात्तिक ४ गतेदेखि नै सञ्चालन भएपनि बाजेको शुद्ध शान्ति सकेर मात्रै उनीहरु बिद्यालय फर्किदै थिए ।बाजेको १३ औं दिनको शुद्ध शान्तिको कार्यक्रम अघिल्लो दिन सकेर दाजु भाइ बिद्यालय आउने क्रममा दू’र्घटनामा परेको पारिवारीक बिद्यालय परिवारले जानकारी दिएको छ ।
बाजेको मृ’त्युको १५ दिनमै आषिशको पनि मृ’त्यु भएको पारिवारीक स्रोतले बताएको छ । बिद्यालयकै अर्का एक शिक्षकले भने ‘ नेभर सेकन्ड म्यान आषिश ६ जना घाइते मध्य सबैभन्दा पहिले मृ’त्यु वरण गरे र मृ’त्युमा पनि उनी फष्ट नै भए । तर, त्यसले हामीलाई असैह्य पीडा दिएको छ।’